Dib u cusbooneysiinta: Sida Sicir-celinta Amazon ay u shaqeyso iyo inta ay qaadaneyso | Martech Zone
Isniin, February 15, 2016 Khamiista, Febraayo 18, 2016 Douglas Karr
Amazon ayaa soo warisay in ganacsatada wax ku iibisa suuqooda ay xisaabtameen 45% ee unugyada la iibiyay rubacii labaad ee 2015, ilaa 41% sanadkii kahoreeyay. Iyada oo malaayiin iibiyeyaal ah ay ku iibinayaan balaayiin badeecado goob ganacsi sida Amazon, iibiyeyaashu waxay ka faa'iideystaan ​​hagaajinta qiimahooda si ay labaduba u tartamaan oo ay wali u sii wadi karaan faa'iidada. Dib-u-qiimeynta ayaa ah istiraatiijiyadda isticmaalka qiimaha si loo gaaro iibsi kordhay.
Waa maxay Dib-u-hagaajinta otomaatiga ah?
Sida nidaamyo badan, in kastoo, way adag tahay in la ururiyo xogta lagama maarmaanka u ah buurta alaabada ka dibna la kordhiyo ama la dhimo qiimaha iyadoo loo eegayo isbedelada ka dhex jira tartamayaashaada. Qalabka dib-u-hagaajinta otomaatiga ah ayaa u soo ifbaxday sidii maalgashi weyn iibiyaasha si ay u dejiyaan xeerarkooda una oggolaadaan nidaamka inuu wax ka beddelo qiimaha marka loo baahdo.
RepricerExpress waa mid ka mid ah aaladahaas, waxayna soo bandhigeen sida dib u soo celinta Amazon ay u shaqeyso iyo inta ay qaadaneyso.
Dib u habeyn ayaa bilaabmaysa markii mid ka mid ah 20ka iibiye ee shay sax ah u beddelo sicirkooda firfircoon, waqtiga qabashada, qiimaha dhoofinta, iyo soo bandhigida.
Amazon wuxuu farriin ugu dirayaa RepricerExpress qiimo, diris iyo macluumaad iibiyaha 20ka iibiye ee ugu sarreeya.
RepricerExpress falanqayn 20ka iibiye ee ugu sareeya macluumaadka kuna socodsiiya sicirkaaga iyaga, xisaabinta qiimahaaga cusub.
RepricerExpress wuxuu sameeyaa hubinta qiimaha cusub si loo hubiyo inuu ku jiro qiimahaaga ugu hooseeya (dabaqa) iyo kan ugu sarreeya (saqafka).
Marka la hubiyo, RepricerExpress waxay ku shubtaa qiimaha cusub shirkadda Amazon howsha.
Amazon waa Nidaamka Ciladda Qiimaha wuxuu hubiyaa qiimaha cusub ee ka soo horjeeda xisaabtaada Amazon Seller Central ugu yar iyo qiimaha ugu badan.
Marka qiimahaaga la xaqiijiyo, waxay ku qoran tahay qiimahaaga hadda jira. Dib-u-celintaani dhammaantood waxay u dhacdaa si isdaba-joog ah muddo 24 saac ah, 7 maalmood usbuucii.
Tags: dib u celinta amazonaaladda amazonqiimaha saqafkaqiimaha sagxaddaqiimaha ugu badanqiimaha ugu yarNidaamka Ciladda Qiimahaceliyahareprecerexpress